Liferea: RSS रिडर जो Google रिडरको साथ सिंक्रनाइज़ गर्दछ लिनक्सबाट
लाइफेरिया (लिनक्स फिड रिडर वा लिनक्स फिड रिडर को लागी संक्षिप्त रूप) एक डेस्कटप अनुप्रयोग हो जुन हामीलाई हाम्रो मनपर्ने साइटहरूको समाचारहरूको साथ अपडेट रहन अनुमति दिन्छ आरएसएस, RDF y एटम, ढाँचामा आयात र निर्यात सदस्यता सूची अनुमति दिँदै ओपीएमएल.
Liferea मा लेखिएको छ gtk त्यसैले यो १००% उपयुक्त छ डेस्कटप वातावरणहरू जसले यी पुस्तकालयहरू प्रयोग गर्दछजीनोम, Xfce)। यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र यसको संस्करणमा 1.6.5 हामीलाई धेरै विकल्पहरू ल्याउँछ। मेरो लागि सब भन्दा चाखलाग्दो यो संग सिन्क्रोनाइज गर्न सक्षम हुनु हो Google Reader, त्यसैले मैले हेर्न मात्र ब्राउजर खोल्नु पर्दैन आरएसएस मनपर्ने।
यदि मलाई मन पर्छ भने, तपाईं प्रयोग Google Reader र तपाइँ यसलाई बाट व्यवस्थापन गर्न चाहानुहुन्छ लाइफेरिया, तपाईं यी साधारण चरणहरू अनुसरण गरेर यसलाई थप्न सक्नुहुन्छ।
बायाँ फलकमा फोल्डर चयन गर्नुहोस्।
यसमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् » नयाँ »नयाँ स्रोत.
तपाईंको छनौट हुने विन्डोमा Google Reader.
तपाईंले आफ्नो ईमेल राख्नुभयो जीमेल र तपाइँको पासवर्ड
त्यो पर्याप्त हुनु पर्छ 😀
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » Liferea: RSS रिडर जो Google रिडरको साथ समिकरण हुन्छ
यो एक उत्तम अनुप्रयोग हो जुन मैले भर्खरै पत्ता लगाएको हुँ, तपाईंको पोष्टको लागि धन्यवाद। दुर्भाग्यवश, यो एक धेरै अस्थिर अनुप्रयोग हो, कम्तिमा उबुन्टु १०.१० सँग मैले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन!
यो दुर्लभ छ कि उबन्टुको त्यो संस्करणमा समस्याहरू छन्, तर यो हुन सक्छ किनकि लाइफ्रीया ब्लगमा लेखकले यस बारे केही टिप्पणी गरेका थिए। मलाई भन्नुहोस् कुन संस्करण तपाईले स्थापना गर्नु भएको हो ..
अघिल्लो सहकर्मीहरू जस्तो नभई, यसले मेरो लागि पूर्ण रूपमा काम गर्‍यो! यद्यपि मैले उबन्टु प्रयोग गर्दैन, तर लिनक्स मिन्ट १ 13 र सत्य यो हो कि यो अचम्मको साथ चल्दछ।
Gowend132 लाई जवाफ दिनुहोस्
LMDE फोरमको पुनर्गठन